Madaxweyne Sarkozy oo saxafi ugu hanjabbay inuu wajiga ka feerayo – SBC
Madaxweyne Sarkozy oo saxafi ugu hanjabbay inuu wajiga ka feerayo
Madaxweynaha dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy ayey ku soo baxdey fadeexad uu ku kacay oo hanjabaad ah taasi oo uu u jeediyey Tafaftire Wargeys oo qoraal ku soo baxay wargeykaasi si xun loogu aflagaadeeyey Carla Bruni oo ah afada ama xaaskiisa.
Sheekadan ayaa waxaa maalinimadii shaley lagu soo qoray jaraa’idka wadanka Faransiiska waxaana la sheegay in Madaxweyne Sarkozy uu telefoon ugu hanjabay nin qoraa ah oo lagu magacaabo Patrick Besson kaasi oo maqaal ka qorey xaaska Sarkozy sanadkii 2008-dii, isagoo ku tilmaamay marwada madaxweynaha “Ra cunto” isagoo ula jeeday Carla Bruni in ay tahay asxaabo nimeed.
Mr Sarkozy ayaa markii sheekadaasi laga qoray xaaskiisa wuxuu si toos ah u wacay tifaftiraha wargeyska lagu magacaabo Le Point Mr Franz-Olivier Giesbert wuxuuna telefoon kula hadlayey mudo 40 daqiiqo ah isagoo waliba ugu hanjabay in uu feer wajiga kala dhici doono
Buug xusuus qor ah oo uu qoray Giesbert ayuu wuxuu ku xusey wadasheekaysigii dhexmarey isaga iyo madaxweyne Sarkozy kaasi oo ku aadanaa hanjabaada sheekada laga qoray xaaskiisa Carla Bruni.
Saxaafada wadanka Faransiiska ayaa maalinimadii shaley ee Jimcaha waxya si weyn uga hadlayeen buugaasi iyadoo sheekadaasi xiiso gaar ah u yeelatey dadka Faransiiska.
Ma jiro wax war ah oo ilaa iyo hada ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Faransiiska ee Madaxweyne Sarkozy ee ku aadan hanjabaada feerka ee laga soo sheegay.
Mr Giesbert wuxuu sheegay in markii ay telefoonka ku wada hadleen Madaxweyne Sarkozy uu aad uga xumaaday warbixinta laga qorey Carla Bruni oo ay xiligaasi isguursanayeen waxaana ciwaan looga dhigay 24 sir ee ku socda Sarkozy.
Warbixinta oo ka koobneyd 24 Sir waxaa mid ka mid ay aheyd talo la siiyey Sarkozy taasi oo aheyd “ Ha barin xaaskaaga cusub wiilashada, Barack Obama ama ragga qurxoon”.
Mr Giesbert wuxuu sheegay Mr Sarkozy oo ka careysan qoraalkaasi in uu soo wacay isla markaana uu ku yiri “Maqaalkan waa mid murugo ah feer ayaana wajiga kugu burburin doona.
Mr Giesbert ayaa waydiiyey Madaxweynaha “ Oo hada ma aniga ayaad ii hanjabaysaa2?.
Mr Sarkozy ayaa markaasi ku jawaabay “Waad istaahishaa, mana garanayo waxa iga horjoogsan kara inaan wajiga kaa feero”.
Mr Giesbert ayaa markaasi Sarkozy ka yiri “Maxaad sameyn laheyd hadii aan qori lahaa in xaaskaagu ay ka hesho inat ragga kii ay aragtaba iskala jiifato isla markaana ay doonayso inay galmo la sameyso ilmahaag”.
Sarkozy ayaa markaasi yiri “Waad arki doonta waxa aan sameyn doon”.
Ka hor intii Carla Bruni oo aheyd gabar Tv-yada wax ka xayeysiisa isla markaan heesta waxay shukaansi iyo xodxodasho kula kacdey rag caan ah oo qaarkood ay yihiin jiliyaal aflaamta oo ay ka mid yihiin jacaylkeedii hore Mick Jagger, Eric Clapton iyo Donald Trump.
Mr Giesbert wuxuu qoray in Ms Bruni markii sheekada laga qoray ay arintaasi xalisay oo ay qaboojisay sheekada iyadoo sheegtey in Mr Sarkozy uu si aad ah u jecel yahay isla markaana aanu eegan karin in arimo caynkaasi ah laga qaro nolasheeda.